बधाई ! जेम्स एन्डरसनले बनाए गजबको कीर्तिमान, भारतिय बलरहरु आसपास समेत छैनन् | TajaKhabarTV
मैदानमा ढलेका एरिक्सनले अस्पतालबाटै भने- ‘म अहिले ठीक छु, चाडै मैदानमा फर्कन्छु’
बधाई ! जेम्स एन्डरसनले बनाए गजबको कीर्तिमान, भारतिय बलरहरु आसपास समेत छैनन्
२०७८, २७ जेष्ठ बिहीबार १९:४९ June 10, 2021 ताजा खबरक्रिकेट
काठमाडौं : तिब्र गतिका बल जेम्स एन्डरसनले इङ्ल्यान्डबाट सबभन्दा धेरै टेष्ट क्रिकेट खेल्ने कीर्तिमान बनाएका छन्। २००३ मा डेब्यू गरेका एन्डरसनले इङ्ल्यान्डबाट १६२औं टेष्ट खेल्दै कीर्तिमान बनाएका हुन्।
३८ वर्षे एन्डरसनले न्युजिल्यान्डविरुद्धको दोस्रो टेष्ट खेल्दै पूर्वकप्तान एलेस्टर कुकले बनाएको कीर्तिमान तोडेका हुन्। पूर्वकप्तान एलेस्टर कुकले १६२औं टेष्ट खेलेका थिए। इंग्ल्याण्डको लागि १५ जना क्रिकेटरले १ सयभन्दा बढी टेष्ट म्याच खेलेका छन्।
एन्डसनले सन् २००३ मा जिम्बावेविरुद्ध खेल्दै टेस्ट क्रिकेटमा ‘डेब्यु’ गरेका थिए । स्टिभ हार्मिसन, म्याथ्यु होगार्ड, अलराउन्डर एन्ड्रयु फ्लिन्टफ जस्ता खेलाडी टोलीबाट अलग भएपछि एन्डरसन मुख्य बलरमा रहँदै आएका छन् ।
टेस्ट क्रिकेटमा एन्डरसनभन्दा बढी विकेट लिने १३ खेलाडी छन् । त्यसमा ८ सय विकेटसाथ श्रीलंकाका मुथैया मुरलिधरन शीर्षस्थानमा छन् ।
अस्ट्रेलियाविरुद्ध नेपालको जोड नतिजामा होइन प्रदर्शनमा
विश्पकप र एसियाकपको दोस्रो चरणको छनोटको अन्तिम खेलमा नेपालले शुक्रबार एसियन पावरहाउस अस्ट्रेलियाको सामाना गर्ने छ। नेपाल र अस्ट्रेलियाबीचको खेल कुवेत सिटीस्थित जाबेर अल अहमद अन्तराष्ट्रिय स्टेडियममा शुक्रबार साँझ९ः४५ बजे हुने छ।
अस्ट्रेलियाविरुद्ध नेपाली टिमको लक्ष्य प्रदर्शनमा सुधार गर्नु हुने छ। खेलअघि भएको प्रिम्याच कन्फ्रेसमा नेपाली टिमका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले अस्ट्रेलियाविरुद्ध आफ्नो ध्यान नतिजामा भन्दा राम्रो खेल्नेमा रहेको बताएका छन्।
‘हामीले पछिल्लो समय खेल्ने शैलीमा केही परिवर्तन गरेका छौं । अहिले त्यसको नतिजा आउन थालेको छ । तर, छोटो समयमा केही पनि सजिलो हुँदैन,’ अलमुताइरीले भने, ‘फुटबलमा नतिजा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हामीले भविष्यमा अझ राम्रो नतिजा दिन सक्ने छौं ।’
उनले अस्ट्रेलियाविरुद्धको खेल नेपालका लागि सजिलो नहुने पनि बताए । उनले जुलाईमा युरोप र अफ्रिकी देशसँग मैत्रीपूर्ण अभ्यास खेल खेल्ने तयारी रहेको पनि बताए। प्रशिक्षक अल्मुताइरीले दीर्घकालीन योजनामा अगाडि बढेको दाबी गर्दै थपे, ‘हाम्रो लक्ष्य पक्कै पनि साफ च्याम्पियनसिप नै हो। सेप्टेम्बरमा हुने यस प्रतियोगिताका लागि तयारी हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो र हामी यसै अनुसार अगाडि बढिरहेका छौं।’
छनोटको समूह बीमा नेपालको विश्वकपको तेस्रो चरणको छनोटमा पुग्ने सम्भावना सकिको छ । तर, एसिया कप छनोटको तेस्रो चरण पुग्ने सम्भावना भने छ। नेपाल एसिया कप तेस्रो छनोटमा सिधै पुग्न नसकेपछि प्लेअफको बाटो भने बाँकी नै छ । ताइपेइविरुद्ध २ जित निकाल्दै छ अंकसहित चौथो स्थानमा रहेको छ । अस्ट्रेलियाविरुद्ध जित निकाल्न सके मात्र नेपालको चौथो स्थानको उत्कृष्ट ४ भित्र पर्ने सम्भावना बाँकी रहन्छ, तर त्यो नेपालका लागि असम्भव जस्तै छ।
२०७८, १ असार मंगलवार १६:०५